Mpanamboatra sy mpamatsy fanaraha-maso fiarovana. China Factory Inspection Security
Fitaratra fitiliana teleskopika manazava
Ny fitaratra teleskopika manazava dia matetika ampiasaina mba hahafahan'ny olona mikaroka baomba na contrabands amin'ny toerana toy ny eo ambanin'ny fiara, zana-kazo, ambanin'ny tany, tafo, valindrihana, jiro pendant sns izay misy mpitsikilo sarotra jerena sy ho an'ny fangatahana fikarohana hafa. Ny inspecteur dia afaka mijery ny toerana rehetra amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny zoro fitaratra sy ny halavan'ny andry teleskopika. Azo ampiasaina amin'ny alina ihany koa izy amin'ny alàlan'ny jiro fanamoriana ao aminy.
Ny XT12-03 dia iray amin'ireo mpitsikilo zava-mahadomelina faran'izay avo lenta sy lafo indrindra azo zahana eran'izao tontolo izao, izay mandray ny teknolojia fanokafana varavarana ion-pseudo kisoa sy algorithm Hardmard. Ireo fomba vaovao ireo dia ampiharina voalohany amin'ny detector IMS na ao an-trano na any ivelany, izay manatsara ny fahaizan'ny signal-to-noise sy anti-interferensi, ary mampihena ny tahan'ny fanairana diso. Ireo fitaovana ireo dia ampiasain'ny governemanta manerantany hamantatra ny fisian'ny zava-mahadomelina ary hamakafaka hoe iza ny karazana fanafody.
Ny rafitry ny fikarohana ao ambanin'ny fiara dia mazàna mandinika ny faritra ambanin'ny fiara isan-karazany. Izy io dia afaka mamantatra haingana sy marina ny fandrahonana / contraband / fanondranana an-tsokosoko olona miafina any ambany. Ny UVSS dia manatsara ny hafainganam-pandehan'ny fiarovana ny fiara sy ny marina, mampihena ny fampiasam-bola amin'ny loharanon'olombelona. Afaka manatsara ny vokatry ny fanadinana tokoa izy io. Io rafitra io dia manazava ny fampahalalana momba ny chassis mba hamaritana ny teknolojia fitiliana voalohany amin'ny famantarana ny solosaina.
Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Masinina scanner X-Ray azo entina, Fitaratra fitiliana fiara, Fakan-tsary fakan-tsary, Scanner X-Ray Portable, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday,